Ny 16 ka hatramin’ny 18 aogositra ho avy izao no hanatanterahana izany ka eny amin’ny “bord” no fotoana isan’andro mandrapahatapitry ny hetsika. Ankoatra ny seho an-tsehatra sy ny kilalao maro samihafa dia hanararaotana indrindra mba hanandramana ireo tsiro vaovaon’ny zava-pisotro vokarin’ny orinasa star toy ny Caprice Letchi-Citrus, na ny Caprice Cola ihany koa ny mpanjifa ankoatra ireo vokatra hafa. Mpanakanto malaza marobe toa an-dry Dalvis, Jaojoby, Big MJ no hanafana sy fotoana mandritra izany ankoatra ny fanentanana hataon’ireo dj samihafa toa an’i Dj Eloi… Arahina asa soa hanampiana ireo mpiarabelona tena sahirana ao Mahajanga raha araka ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny orinasa Star mba ny rehetra no higoka ny tombontsoa azo avy amin’izany. Tsy misy atahorana ny fandriampahalemana mba hahafahan’ny rehetra miara-mialavoly. Hisy ny toerana hahafahan’ny ankizikely mialavoly manokana, hetsika izay hofaranana amin’ny asa fanadiovana lehibe ho mariky ny fiarovana ny tontolo iainana.